Frantsa: Andro tsy misy mpiavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2009 18:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Italiano, bahasa Indonesia, English
Maro amin'ny mpanara-maso sy mpikatroka ny politika frantsay no miahiahy tetika hafahafa ao ambadiky ny adi-hevitra momba ny “identité nationale na fiavaham-pirenena” izay natsangan'ny filoha Nicolas Sarkozy sy ny Minisitry ny fifindra-monina, fampanazarana, fiavaham-pirenena ary ny fampandrosoana miray hina [Fr], Atoa Eric Besson. Nampiandraiketina tamin'ny prefe solontenan'ny fanjakana eny anivom-bahoaka ity fanatanterahana ity fanapahan-kevitra ity.
Namaly bontana ny mpanohitra miaraka amin-dramatoa Martine Aubry, mpitarika ny antsoko sosialista raha nilaza nandritra ny fihaonana tany Grenoble fa manao izay mahadikidiky an'i Frantsa ny filoha Nicolas Sarkozy raha mampifandrafy ny fiavaham-pirenena amin'ny fifindra-monina any amin'ny firenenkafa.
Ary ankoatra izany moa, mba inona ny dikan'io ho an'ny taranaka faharoa na fahatelon'ny mpiavy?
Tamin'ny nahatsiarovana ny ankivy amerikana lehibe nitranga tany Etazonia, andro iray nanaovan'ny mpifindra monina, na ara-dalàna na tsia, ary ny ankamaroany dia Latino-Amerikana tamin'ny 1 May 2006, no namoronana vondrona na “collectif” iray, antsoina amin'ny anarana hoe : La journée sans immigrés – 24 heures sans nous (Andro tsy misy mpiavy – 24 ora tsy misy antsika), izay kasaina hotontosaina amin'ny voalohan'ny marsa 2010. Misongadina ao amin'ny tranonkalany [fr] ny fanambarany, ary nitsangana tamina faritra 10 ihany koa ny vondrona Facebook. Ato sy ato avy ny misy ny bolongana sy ny dinika (forum).
Toy izao no fanombohan'ny fanambarana:
Izahay, lehilahy sy vehivavy, avy amin'ny fivavahana samihafa, avy amin'ny ankolafy politika rehetra, samihafa volonkoditra, mpiavy, taranaka mpiavy, olom-pirenena mahatsapa ny anjara biriky entin'ny mpiavy amin'ny firenentsika, dia leon'ny teny tsy voahevitra ataon'ny tompon'andraikitra politika sasany izay mikendry hanasoketa ny mpiavy sy ny taranany ho mpanao heloka. Marihina fa ny mpiavy dia izay heverin'ny hafa ho izany ankoatra ny fiaviany aza. Noraisinay io voambolana lasa fanompana io ka nomenay hasina noho ny fampiasana azy ara-politika.
Nanazava nandritra ny resadresaka tao amin'ny TV, notsongaina ao amin'ny Le Blog de Rose Blanche, i Peggy Derder, filoha lefitry ny vondrona “Andro tsy misy mpiavy” [Fr]:
Miantso ny mpiavy, taranaka mpiavy ary ny olom-pirenena mahatsapa ny anjara biriky entin'ny fifindra-monina (avy any amin'ny firenen-kafa) izahay tsy handray anjara eo amin'ny sehatra ara-toe-karena eto amin'ny Firenena mandritra ny 24 ora. Mety hanana endrika maro izany tsy miasa izany : mitokona, maka andro RTT na congé… Antsoina ihany koa mba tsy hanjifa : tsy mandeha mihinana any amin'ny Mc Donald's, tsy miantsena sns. Amin'ny fahabangana no tiantsika hamantarana ny ilàna antsika. Amin'ny fikitihana ny fanainga ara-toe-karena no hanehoantsika fa harena isika amin'ny filaza mivantana na ankolaka, singa manetsika ny toe-karena sy ny fiaraha-monina.
Niely haingana tany amin'ny tontolon'ny politika ny fanohanana. Mpikatroka amin'ny antoko afovoany MIP tsy te-ho ivelany, ary dia nifampitantana amin'ny antoko ankavia Intox 007:
Eny izany, raha ity no andro anararaotana amin'ny mpihatsaravelatsihy fa maro ny asa (ary tsy any amin'ny saranga ambany ihany) no sahanin'ny mpiavy, teny manao tsinain-kankana sy lasa fanaratsiana. Ary mendrika toy izay teraka aty ihany koa ireo olom-pirenena ireo, fa lasa ilanjalanjana orona manko izy ireo ka tsy maintsy resena izany.
Faly tokoa i Demain le nouveau Congo Brazzaville nampita ny hafatra, tahaka ny dinika ao amin'ny gazety Alzeriana city DZ.
Na izany aza dia misy ihany ny feo manivaka, ary mety ho tsy avy amin'ny anantenana izany aza.
Leon'izy ity – sy io Andro io i Merle moqueur (”Vorona Mpaneso”), ary amim-panesoana no ampitandremany amin'izay mety ho tsy fifankahazoan-kevitra amin'ilay tigetra “Tsy misy mpiavy” :
Ah, mba tsy nanana izany indray isika, andro tsy misy mpiavy. Izany no hevitry ny avy amin'ny antoko ankavia, manambatra, miteraka fifandraisana ara-piarah-monina, ary tsy ratsy mihitsy. Izany ny fomba fiteny hahafaly ny sasany. Vonoy ny solosainanao, raiso ny basinao, mandraisa fiara fitaterana ary mankanesa aty amin'ny Felam-boninkazon'ny fandrosoana. Tsy misy basy intsony ? May ? Ajanony ny rediredinao mpiaroaro tena, kamarady, dia mba mandehana kely. Mandehana any amin'ny Mainty ary dia mitifitifira fahatany, ity ny andro tsy misy mpiavy, zonao izany.
Ary fa naninona no voalohan'ny volana marsa? Iverenentsika vakiana ny lazain'ny fanambarana :
Tamin'ny 1° marsa 2005 no nampiharana ny “lalànan'ny fidirana sy fiantranoan'ny vahiny ary ny zo hialokaloka”iza lazaina amin'ny ankapobeny hoe lalàna momba ny vahiny. Io lalàna io no nanome endrika ny fifindramonina ilaina, na raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe, fifindramonina ifantenana amin'ny mason-tsivana ara-toe-karena. Tsy mahita andro hafa tsaratsara kokoa noho io izahay hanaovana ny “Andro tsy misy mpiavy”.